ESI EWEPU MMELITE NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Iwepụ mmelite na Windows 7
Mmelite na-enye aka iji hụ na arụmọrụ kachasị mma na nchebe nke usoro ahụ, ọ bara uru na ihe ndị mpụga na-agbanwe. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ụfọdụ n'ime ha nwere ike imerụ usoro ahụ: nwere nkwarụ n'ihi nrụpụta onye nrụpụta ma ọ bụ esemokwu na ngwanrọ arụnyere na kọmpụta. Enwerekwa okwu ndị a na-etinyeghị asụsụ na-enweghị isi nke na-abara onye ọrụ ahụ uru, mana ọ na-ewe ohere n'elu diski ike. Mgbe ahụ ajụjụ ahụ na-ebili na iwepụ ihe ndị dị otú ahụ. Ka anyị chọpụta otu esi eme nke a na kọmputa na-agba Windows 7.
Hụkwa: Otu esi gbanyụọ mmelite na Windows 7
Ị nwere ike wepu ma mmelite ndị ahụ arụnyere na usoro na faịlụ faịlụ ha. Ka anyị gbalịa ịtụle ụzọ dịgasị iche iche nke edozi ihe aga-eme, gụnyere otu ị ga-esi mebie nsụgharị usoro Windows 7.
Usoro 1: Ogwe njikwa
Ụzọ kachasị ewu ewu iji dozie nsogbu a na-amụ bụ iji "Ogwe njikwa".
Pịa "Malite". Gaa "Ogwe njikwa".
Na ngọngọ "Mmemme na Ngwa" họrọ "Lelee mmelite arụnyere".
E nwere ụzọ ọzọ. Pịa Nweta + R. Na shea na-egosi Gbaa ọsọ ome na:
Na-emeghe Ụlọ Ọrụ Nwelite. N'akụkụ aka ekpe na ala bụ ngọngọ "Leekwa". Pịa na caption "Mmelite arụnyere arụnyere".
Ndepụta nke Windows components na ụfọdụ ngwaahịa software, nke sitere n'aka Microsoft, ga-emeghe. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị aha nke ihe ndị ahụ, kamakwa ụbọchị nke ntinye ha, yana koodu KB. Ya mere, ọ bụrụ na e kpebiri iwepụ ihe akụrụngwa n'ihi njehie ma ọ bụ esemokwu na mmemme ndị ọzọ, na-echeta ụbọchị nke njehie ahụ, onye ọrụ ga-enwe ike ịchọta ihe enyo na listi dabere na ụbọchị e debere ya n'ime usoro.
Chọta ihe ịchọrọ iwepụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu mpaghara Windows, chọọ ya na otu ihe dị iche iche "Microsoft Windows". Pịa ya na bọtịnụ òké ahụ (PKM) wee họrọ nhọrọ naanị - "Hichapụ".
I nwekwara ike ịhọrọ ihe ndepụta ahụ na bọtịnụ òké aka ekpe. Wee pịa bọtịnụ "Hichapụ"nke dị n'elu ndepụta.
A windo ga-apụta ebe a jụrụ gị ma ịchọrọ n'ezie ihichapụ ihe ahọrọ. Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma, wee pịa "Ee".
Usoro mmeghe na-agba ọsọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ahụ nwere ike ịmalite (ọ bụghị mgbe nile), nke na - ekwu na ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa maka mgbanwe ndị ị ga - eme. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya ozugbo, wee pịa Megharia Ugbu a. Ọ bụrụ na enweghị oke mkpa iji dozie mmelite, wee pịa "Weghachite mgbe e mesịrị". Na nke a, a ga-ewepu ihe niile ahụ naanị mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ahụ na aka.
Mgbe kọmputa malitegharịrị, a ga-ewepụchaa ihe niile a họọrọ.
Ihe ndị ọzọ dị na windo "Mmelite arụnyere arụnyere" wepụrụ site n'iji ya tụnyere iwepu ihe Windows.
Họrọ ihe achọrọ, wee pịa ya. PKM ma họrọ "Hichapụ" ma ọ bụ pịa bọtịnụ ahụ na otu aha ahụ n'elu ndepụta.
Otú ọ dị, n'ọnọdụ a, interface nke windo ndị ga-emeghe n'ihu usoro mmeghe ga-adịtụ iche karịa ihe anyị hụrụ n'elu. Ọ dabere na melite nke akụrụngwa ị na-ehichapụ. Otú ọ dị, ihe nile dị mfe ma na-agbaso ihe ndị ahụ na-egosi.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na ị nwere nrụnye akpaaka, a ga-ebughachi ihe ndị ahụ ehichapụrụ ọzọ mgbe ụfọdụ. Na nke a, ọ dị mkpa iji gbanyụọ ihe omume akpaaka ka i wee nwee ike iji aka gị họrọ nke a ga-ebudatara components na nke ekwesịghị.
Ihe ọmụmụ: Ịwụnye mmelite Windows 7 na aka
Usoro 2: "Iwu Iwu"
Ọrụ a na-amụ na isiokwu a nwekwara ike ịrụ site na itinye iwu ụfọdụ na windo "Iwu iwu".
Pịa "Malite". Họrọ "Mmemme niile".
Gaa na ndekọ "Ụdị".
Pịa PKM site "Iwu Iwu". N'ime ndepụta, họrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
A na windo na-egosi "Iwu iwu". N'ime ya, ịkwesịrị ịbanye iwu dịka usoro a:
wusa.exe / iwepụ / kb: *******
Kama ide ihe "*******" Ịkwesịrị ịwụnye koodu KB nke mmelite ịchọrọ iwepụ. Ọ bụrụ na ị maghị koodu a, dịka e kwuru na mbụ, ịnwere ike ile ya na listi mmelite arụnyere.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ wepu koodu nchekwa na koodu KB4025341mgbe ahụ, iwu ahụ e nyere n'iwu ahụ ga-adị ka nke a:
wusa.exe / iwepụ / kb: 4025341
Mgbe ịbanye na pịa Tinye.
Mmalite ahụ na-amalite na sistemụ standalone.
N'oge ụfọdụ, windo na-egosi ebe ị ghaghị ikwenye ọchịchọ ị wepụ ihe ndị akọwapụtara na iwu ahụ. Iji mee nke a, pịa "Ee".
The installer na-arụ ọrụ mmemme nke usoro.
Mgbe ịmechara usoro a, ị nwere ike ịmalitegharịa kọmputa gị maka iwepụ kpamkpam. Ị nwere ike ime ya na mbụ ma ọ bụ site na ịpị bọtịnụ Megharia Ugbu a na igbe ngosi pụrụ iche, ọ bụrụ na ọ dị.
Ọzọkwa, mgbe ị na-ehichapụ ya "Iwu iwu" Ị nwere ike iji àgwà ndị ọzọ nke installer. Ndepụta zuru ezu nwere ike ịlele site na ịpị "Iwu Iwu" na-eso iwu na ịpị Tinye:
A ndepụta zuru ezu nke ndị ọrụ nwere ike itinye na "Iwu iwu" mgbe ị na-arụ ọrụ na onye na-arụ ọrụ na-esiteghị, gụnyere mgbe ị na-ewepụ ihe components.
N'ezie, ọ bụghị ndị ọrụ a niile dị mma maka ebumnuche ndị akọwapụtara na isiokwu, ma, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na i tinye iwu ahụ:
wusa.exe / iwepụ / kb: 4025341 / jụụ
ihe KB4025341 ga-ehichapụ na-enweghị igbe okwu. Ọ bụrụ na achọrọ reboot, ọ ga-eme na-akpaghị aka n'enweghị nkwenye onye ọrụ.
Ihe Ọmụmụ: Ịkpọ "Iwu Iwu" na Windows 7
Usoro 3: Cleanup Disk
Ma mmelite ahụ dị na Windows 7 ọ bụghị naanị na ọnọdụ arụnyere. Tupu echichi, a na-eburu ha niile na draịvụ ike ma chekwaa ebe ahụ ruo oge ụfọdụ mgbe ọ nwụsịrị (ụbọchị 10). Ya mere, faịlụ ndị a na-etinye mgbe nile na-arụ na draịvụ ike, ọ bụ ezie na n'eziokwu, e mechaworị nwụnye. Na mgbakwunye, enwere ikpe mgbe ebudatara ngwugwu na kọmputa ahụ, mana onye ọrụ, na-emelite aka, achọghị ịwụnye ya. Mgbe ahụ, ihe ndị a ga-eme ka "gbasaa" na diski uninstalled, naanị ịnweta ohere nke enwere ike iji maka mkpa ndị ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na emeliteghị nkwupụta mmejọ. Mgbe ahụ, ọ bụghị nanị na ọ na-ewe ohere na-adịghị amị mkpụrụ na draịvụ ike, mana o kweghịkwa ka usoro ahụ zuru ezu, ebe o weere na ihe a dị na mbụ. N'okwu ndị a, ịkwesịrị ikpochapụ folda ebe ebudatara nwelite Windows.
Ụzọ kachasị mfe iji wepụ ihe ndị ebudatara bụ iji kpochapụ diski ahụ site na ya.
Pịa "Malite". Ọzọ, gafee ihe odide "Kọmputa".
A windo mepee na ndepụta nke mgbasa ozi ejikọrọ na PC. Pịa PKM na ụgbọala ebe Windows dị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ngalaba a C. Na listi, họrọ "Njirimara".
Mpido windo ahụ malitere. Gaa na ngalaba "General". Pịa ebe ahụ "Cleanup Disk".
Na-enyocha ohere nke a ga-ekpochapụ site n'iwepụ ihe dị iche iche dị ntakịrị.
Ihuenyo na-egosi na ihe nwere ike kpochapụ. Ma maka ebumnuche anyị, ịkwesịrị ịpị "Kọwaa faịlụ faịlụ".
Enwere ike ịchọta atụmatụ nke ohere ọ bụla a ga-ekpochapụ, mana oge a na-eburu faịlụ faịlụ.
Igodo nhicha ahụ meghere ọzọ. Na mpaghara "Hichapụ faịlụ ndị na-esonụ" Na-egosiputa ụdị dị iche iche dị iche iche nke nwere ike wepụ. A ga-ehichapụ ihe ndị a ga - ehichapụ na akara akara. Ihe ndị ọzọ ndị a na-echeghị. Iji dozie nsogbu anyị, lelee igbe nlele ahụ "Ihichapu emelite Windows" ma Windows Update Log Files. N'adịghị ka ihe ọ bụla ọzọ, ọ bụrụ na ịchọkwaghị ehicha ihe ọ bụla, a ga-ewepụ checkmarks. Iji malite usoro nhicha, pịa "OK".
A malitere windo, na-arịọ ma onye ọrụ ahụ chọrọ n'ezie ihichapụ ihe ndị ahọrọ. A dọrọ aka ná ntị na nhichapụ ahụ agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ nwere obi ike na omume ha, mgbe ahụ, ọ ga-etinyere "Hichapụ faịlụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, usoro maka iwepụ ihe ndị a họọrọ. Mgbe o mechachara, a na-atụ aro ka ị malitegharịa kọmputa ahụ n'onwe gị.
Usoro 4: Iwepụ akwụkwọ na nbudata faịlụ
Ọzọkwa, a pụrụ wepụ aka na aka site na nchekwa ahụ ebe ebudatara ha.
Ka ọ bụrụ ihe ọ bụla iji gbochie usoro ahụ, ịkwesịrị ịkwụsị ọrụ nwelite oge, ebe ọ nwere ike igbochi usoro iwepụ faịlụ. Pịa "Malite" ma gaa "Ogwe njikwa".
Họrọ "System na Nchebe".
Ọzọ, pịa "Nchịkwa".
Na ndepụta nke ngwaọrụ ngwaọrụ, họrọ "Ọrụ".
Ị nwere ike ịga na windo nlekọta ọrụ n'enweghị eji "Ogwe njikwa". Kpọọ Ịkpọ Ọrụ Gbaa ọsọsite na ịpị Nweta + R. Bụrụ na:
Na-amalite window windo ọrụ. Pịa na aha kọlụm ahụ "Aha", Mee aha ndi mmadu n'usoro ederede iji weputa ya ngwa ngwa. Chọta "Mmelite Windows". Chee ihe a ma pịa "Kwụsị ọrụ".
Ugbu a na-agba ọsọ "Explorer". N'okpuru ụlọ ọrụ ya, denye adreesị na-esonụ:
Pịa Tinye ma ọ bụ pịa aka nri nke akara na akụ ahụ.
Na "Explorer" mepee ndekọ nke enwere ọtụtụ nchekwa. Anyị, karịsịa, ga-enwe mmasị na kọntaktị "Download" ma "DataStore". A na-echekwa ha n'onwe ha na nchekwa mbụ, na ntanetị nke abụọ.
Gaa na nchekwa ahụ "Download". Họrọ ọdịnaya ya niile site na ịpị Ctrl + Ama hichapụ iji zọpụta Mgbanwe + Hichapụ. Ọ dị mkpa iji nchikota a na-eme ihe n'ihi na mgbe ị na-etinye otu bọtịnụ otu Hichapụ a ga - eziga ọdịnaya ahụ na Trash, ya bụ, ga - anọgide na - ejide ohere ụfọdụ. Iji otu nchikota a Mgbanwe + Hichapụ ga-ewepụ kpamkpam.
N'eziokwu, ị ka ga-ekwenye ihe i bu n'obi na windo dị obere nke na-egosi mgbe nke ahụ gasịrị site na ịpị "Ee". Ugbu a ga-ewepụ.
Gaa na nchekwa ahụ "DataStore" na n'otu ụzọ ahụ, ya bụ, site na ịpị Ctr + Ana mgbe ahụ Mgbanwe + Hichapụ, wepu ọdịnaya ahụ ma kwado ihe ị mere na igbe.
Mgbe emechara usoro a, iji ghara ịhapụ ohere iji melite usoro ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, laghachi na windo nlekọta ọrụ. Tinye akọrọ "Mmelite Windows" ma pịa "Malite ọrụ".
Nzọụkwụ 5: Wepụ mmelite nbudatara site na "Line Line"
A ga-ewepụ mmelite uploaded na "Iwu iwu". Dịka na ụzọ abụọ gara aga, ọ ga-ewepu faịlụ ndozi ahụ site na cache, ma ghara ịlaghachi ihe ndị ahụ edozi, dịka na ụzọ abụọ mbụ.
Gbaa ọsọ "Iwu Iwu" nwere ikike nhazi. A kọwara n'ụzọ zuru ezu iji mee nke a Usoro 2. Iji gbanyụọ ọrụ ahụ tinye iwu:
Na-esote, tinye iwu ahụ, n'eziokwu, ikpochapụ cache nbudata:
ren% windir% SoftwareDistribution SoftwareDistribution.OLD
Pịa ọzọ Tinye.
Mgbe ịhichachara, ịkwesịrị ịmalitegharịa ọrụ ahụ. Bido n'ime "Iwu iwu":
Pịa ala Tinye.
Na ihe atụ ndị a dị n'elu, anyị hụrụ na ọ ga-ekwe omume iwepụ mmelite abụọ ahụ arụnyere site na ịpịghachi ha, yana faịlụ buutọtu na-ebudatara na kọmputa ahụ. Maka ọrụ ọ bụla a, enwere ọtụtụ ngwọta ozugbo: site na interface Windows na site na "Iwu Iwu". Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche maka ọnọdụ ụfọdụ.